Iwu oru | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Iwu oru
Kedu ihe bụ ụzọ na nlekọta ahụike na onye na-akwụ ụgwọ ya?
Kedu ihe bụ ụzọ na nlekọta ahụike na onye na-akwụ ụgwọ ya? Ndị gọọmentị kwadoro usoro mgbanwe nke Ministry of Public Health, nke ga-echere ahụike Russia na afọ isii sochirinụ. Nhazi usoro ụzọ, ...
Kedu ihe ga-abụ nke fọdụrụ mgbe abalị gasịrị? Na dị ka isiokwu?
Kedụ ihe kwesịrị izu ike ma ọghachị n'abalị? Ma n’usoro dị? Maka oge a na-atụgharị abalị, enwere naanị otu mmachi - ngbanwe abalị kwesịrị ịbụ 1 otu elekere dị mkpụmkpụ karịa ...
Ònye ka a na-ewere dịka onye ọkachamara na-eto eto na agụmakwụkwọ?
Ònye ka a na-ewere dịka onye ọkachamara na-eto eto na agụmakwụkwọ? ihe omuma ya sitere na 1 ruo 3 afọ. Onye ọkachamara mbụ ahụ kọwara echiche nke ọkachamara na-eto eto. Ihe ọ bụla pụrụ iche maka ndị ọkachamara na-eto eto nke usoro ...
Kedu ihe onye ọrụ nke ngalaba ndị ọrụ ahụ mere
Kedu ihe onye na-arụ ọrụ na ngalaba HR nke ọrụ 30 na-arụ ọrụ na-arụ ... nke a n'ozuzu ya ??? Compatible dakọtara na ndụ ?? Okpokoro na-emepu abuo abuo na okpokoloji kewapu SPECIALIST NA FRAMES Ibu ọrụ. Na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na nzukọ ...
Enwere ụtụ isi ụtụ isi?
Enwere ụtụ isi ụtụ isi? Ụtụ ụtụ isi abụghị naanị maka enyemaka ego, ụgwọ ọrụ ọzọ, ụgwọ ọ bụla, ụgwọ ego na ọrịa - taxable N'ezie, a na-atụ ụtụ isi ụtụ isi. n'ihi na ọ bụ ihe nkịtị ego ...
Usoro ọrụ ọ na-agbanwe maka ndị ime ime?
Usoro ọrụ ọ na-agbanwe maka ndị ime ime? Ị na-ede akwụkwọ maka ọrụ oge-oge maọbụ ụbọchị (ị ga-ekpebi ihe ịchọrọ ịrụ ọrụ) na onye ọrụ ahụ enweghị ikike ịjụ gị! TK RF ...
Ọnụego na ụgwọ. Kedu ihe dị iche?
Ọnụego ya na ụgwọ gị. Kedu ihe dị iche? A na-akwụ ụgwọ oge ọrụ dịka oge awa ọrụ. Ọtụtụ mgbe, nke a bụ 50% nke ụgwọ. Gwọ ụgwọ - ego ole a kwụrụ ụgwọ maka oge ụfọdụ, dịka iwu…
biko dokwuo anya nka. 125 TK RF na Art. Xnumx
biko dokwuo anya nka. 125 nke Usoro Ọrụ nke Russian Federation na Art. 115 enwere ụdị ihe a - nhazi oge ezumike. ma eleghi anya ọ bu ya du ya? Ka ị kwenyere onye were gị n'ọrụ, isi ihe bụ na akụkụ mbụ ezumike bụ ...
Ogologo oge ole ka m ga-akwụ maka ezumike ọrịa na-arụ ọrụ?
Ogologo oge ole ka m ga-akwụ maka ezumike ọrịa na-arụ ọrụ? Onye na-ahụ maka ọrụ ahụ na-enye uru maka enweghị ike ịrụ ọrụ nwa oge iji rụọ ọrụ, maka ime na ịmụ nwa, nkwekọrịta ọnwa maka nwa na-elekọta 10 kalenda ụbọchị site na ...
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti òtù ahia na òtù ahia?
Kedu ihe dị iche n’etiti ndị na-azụ ahịa na otu? njikọ - ọgbakọ. kọmiti azụmaahịa - nzukọ ndị otu nzukọ (nzukọ). Kọmitii na-ahụ maka azụmahịa abụghị ndị isi ndị otu. Nke a bụ mpaghara ọgbakọ izizi nke ngalaba sekọndrị na ụlọ ọrụ…
Iwu nke enweghị ike na esemokwu ọrụ.
Iwu nke enweghị ike na esemokwu ọrụ. Ọ bụrụ na ọ nọ n'ọrụ ọrụ. Ọ dị mkpa ịdegara ụlọ ọrụ onye ọka iwu ahụ akwụkwọ. Oge ọbịbịa maka onye ọrụ ga-ekpe ikpe maka ikpebi nsogbu esemokwu nke onye ọ bụla na-esite na ya
ihe akwụkwọ ndị ọrụ ga-enye ụlọ ọrụ LLC mgbe ha na-agbahapụ onwe ha
kedu akwụkwọ onye na-arụrụ ọrụ kwesịrị inye ụlọ ọrụ LLC mgbe ịchọrọ na-amasị Christina! Nkeji edemede 84.1 nke Usoro Ọrụ nke Russian Federation. Usoro izugbe maka ịdenye aha nkwụsị nke ọrụ nkwekọrịta Nkwụsị nke nkwekọrịta ọrụ na-emepụta ...
Ogologo oge ole ka mmadụ kwesịrị ịrụ ọrụ oge?
Ogologo oge ole ka mmadụ kwesịrị ịrụ ọrụ oge? Kedu ihe ga - esi na ya pụta na onye ọrụ ma ọ bụrụ na ọ pụta na ọ na - arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe oge ụfọdụ, ihe karịrị ọkara nke iwu nke isi ọrụ?
Kedu usoro ị ga - eji mechie nkwekọrịta ọrụ?
Kedu usoro ị ga - eji mechie nkwekọrịta ọrụ? ị ga-achọ nlele nke ọrụ nkwekọrịta nke onye isi dọkịta na-arụ ọrụ. N'ikwekọ na Usoro Ọrụ nke Russian Federation, onye ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ mmekọrịta ya na onye ọrụ ederede (ihe ...
Enwere m ike ịla ezumike ụtụtụ? Ọ bụrụ na ị nwere 7 ọnwa fọdụrụ tupu ezumike nká !!! Ọ bụrụ na ị nwere ike mgbe ahụ, gịnị bụ obere?
Enwere m ike ịla ezumike ụtụtụ? Ọ bụrụ na ị nwere 7 ọnwa fọdụrụ tupu ezumike nká !!! Ọ bụrụ na ị nwere ike mgbe ahụ, gịnị bụ obere? Naanị mgbe ị na-agbapụ maka redundancy ma ọ bụ na ...
Enwere ụtụ isi ego site na ịkwụ ụgwọ ọrịa?
Enwere ụtụ isi ego site na ịkwụ ụgwọ ọrịa? Ụlọ ọgwụ ahụ bụ ụgwọ onye akwụ ụgwọ nke onyinye ahụ n'oge ọ na-enweghị ike ịrụ ọrụ, nke mere ka a kwụsị ụtụ. ee 1) Art. Ntuzi Ụtụ 217 gbanwee na ...
Enwere ike ịmepụta ụgwọ maka ọrụ ndị ọzọ?
Enwere ike ịmepụta ụgwọ maka ọrụ ndị ọzọ? Nkeji edemede 151. Ụgwọ mgbe ị jikọtara ọrụ na arụmọrụ nke ọrụ nke 1 na-arụ ọrụ nwa oge. Ihe 151 TK bu ihe di n'ime ihe di n'ime ...
Kedu ụdị ezumike nká na Russia.
Kedu ụdị ezumike nká na Russia. ppRegionRussiiMinimum penshion, na rub. / ọnwa Nkezi ezumike nká, na-edozi. / monthIn Russia 6 354 10 890 12 4002014 2015 2014 G. ...
kedu ihe onye ọrụ na-ebelata
ihe dị mkpa maka onye ọrụ n'ọnọdụ mbelata Onye ọrụ mgbe ọ kwụsịrị ọrụ nkwekọrịta n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ma ọ bụ nhazi ego nke otu nzukọ aghaghị ịkwụ ụgwọ onye ọrụ: ụgwọ ọrụ maka ...
Ịkwụ ụgwọ nke ọmụmụ na-ahapụ. Usoro, iwu, nghazi.
Ịkwụ ụgwọ nke ọmụmụ na-ahapụ. Usoro, iwu, nghazi. Ihe a na-akpọ ọmụmụ na-ahapụ ndị ọrụ na absentia na-amụ akwụkwọ na mahadum, onye ọrụ ga-enye ya na ndabere nke akwụkwọ oku nke ụlọ ọrụ ahụ nyere. Ụdị nke akwụkwọ dị otú ahụ kwadoro site na Ụlọ nke Ozi nke Agụmakwụkwọ ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 1,063.